Faahfaahin ka soo baxaysa qarax miino oo ka dhacay Ex-control Afgooye magaalada Muqdisho – Banaadir weyne
Faahfaahin ka soo baxaysa qarax miino oo ka dhacay Ex-control Afgooye magaalada Muqdisho
15-ta Disheembere, 2016
Ugu yaraan 7 ruux oo saddex ka mid ah ay ahaayeen carruur walaalo ah ayaa ku dhintey qarax miino lagu aasay maqaaxi ku tiil meel ku dhow ex kontarool Afgooye.
Dadka ku dhintey qaraxan ayaa afar ka mid ah waxa ay ahaayeen ciidamo iyadoo qaraxan ay ku dhaawacmeen shan ruux oo isugu jira ciidan iyo dad rayid ah. Qaraxan ayaa waxaa sheegtay ururka Alshabaab iyagoo sheegay in ciidamo badan ay qaraxaas ku dileen.
Magaalada Muqdisho oo ammaanka aad loo adkeeyay ayaa waxa uu qaraxan ahaa kii labaad ee ka dhaca magaalada Muqdisho, iyadoo saaka qarax ka dhashay gaari waxyaalaha qarxa lagu soo raray uu ka dhacay meel aan ka fogeyn Madaxtooyada dalka.
Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa meelo badan laga xirey iyadoo wararka ay sheegayaan in laga yaabo in maalmaha soo socda inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho la xiro iyadoo la filayo in doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo Madaxweynaha ay dhowaan dhacaan. – Jowhar Media
Dagaal mar kale ka dhacay Deegaanka Lambar Konton ee Shabeelaha Hoose
In ka badan 700 arday oo ka qalin jebisay Jaamacadda Plasma ee Muqdisho
XOG: Xukuumadda Soomaaliya oo kala dishay Axmed Madoobe & Wasiir aad ugu dhawaa (Akhri sababta)
Askari Ka Tirsanaa Ciidamada Dowladda Oo Lagu Dilay Muqdisho